Noho izany dia nanao trano rantsan-kazo amin'ny biby greenscreenen | Apg29
Noho izany dia nanao trano rantsan-kazo amin'ny biby greenscreenen
Nisy olona nanontany raha ny alika, tsy misy, dia natao tamin'ny lamba maitso!
Amin'ny efijery teknolojia maitso miampy sary sy lahatsary maro, dia efa eto amin'ity trano ity ny biby.
Amin'ny lamba maitso somary tsotra sy fitaovana, ianao ankapobeny mahazo na inona na inona. Vakio eto ny fomba ny velona nataoko lahatsary efitrano miaraka amin'ny biby.
Miarahaba, misaotra anareo noho ny asa mazoto ataonao isan'andro. Ny tena mpanompo izay mamafy voa. Koa tiako ny misaotra anareo noho ny.
Dia Manontany tena aho hoe, ahoana no hahazo ireo Cozy mangatsiatsiaka sy fiaviana? Toy ny mafy amin'ny trano rantsan-kazo sy ny biby! Misy efijery maitso tsara, fa toy izany ny fomba hividy fiaviana?
Misaotra rehetra ataonao.
Jereo ny lahatsary trano rantsan-kazo miaraka amin'ny biby
Mampiasa maimaim-poana aho programa antsoina hoe NB-Studio . Noho izany dia afaka mandefa mivantana sy mampiasa ny maitso asa efijery .
Ny rindrina aoriako Voasaron'ny lamba maitso.
Mba jereo ny lamba maitso, na dia tsy amin'ny sary dia nandinika lalina solosaina fanampiana.
Izy io dia somary mamitaka ny fomba nametraka ny mazava, fotsy mandanjalanja sy ny hatsiaka, fa tsy maintsy miezaka ny zavatra avy.
Mba hanoratra ny feo, dia mampiasa tsara USB mikrô.
Live amin'ny fantsona maro niara-
I nandefa mivantana amin'ny fantsona maro indray miaraka. To izany, dia mampiasa ny aterineto fanompoana restream.io izay afaka lafo hevitra lehibe.
Ary eto dia mety ho fampiasana ny lamba maitso solosaina sy ny teknolojia maoderina .
Ny trano rantsan-kazo ny biby aho, mampiasa sary sy horonan-tsary maro.
Sary I fampiasana:
Ny rindrina aoriako
Ny varavarankely amin'ny lay sy ny voninkazo vazy
Ny ririnina tontolon'ny am-baravarankely
Ireo sary azo alaina maimaim-poana avy amin'ny pixabay.com , ho fanampin'ny amin'ny ririnina tontolo izay nataoko sary.
Videos I mampiasa:
Ny vorona manidina
Ireo no mpampiasa lahatsary YouTube fa efa alalana hampiasa maimaim-poana. Izy ireo zatra manoratra raha afaka mampiasa azy ireo na tsia. Dia misy tokoa fa maro amin'ny aterineto Afaka maka ny maimaim-poana, ho fanampin'ny izany vidiny.
Satria te hampiely ny filazantsaran'i Jesoa Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra. Ny fandaharana efa lasa tsotra kokoa fampianaran'i Jesosy sy mazava fanazavana ny fomba fanekena an'i Jesosy Kristy ary ho voavonjy.
Izany no tanjon'ny Apg29 manontolo. Fa ny olona dia tokony hahazo ny Filazantsara ho tsotra araka izay azo atao aseho misaraka mba hahafahany mandray an'i Jesosy.
Azafady niely Apg29 sy ireo horonan-tsary ho toy ny olona maro araka izay azo atao. Aoka izy ireo handre ny hafatra tsotra 'ny Tompo Jesoa Kristy toy izany koa izy ireo dia manana fahafahana handray Azy mba ho voavonjy.